MM Abiyyi Ahimad qabsoo Oromoo ni dagataniimoo milkeessuudhaaf dhama'aa jiru? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Waraabuu Jiloo
Ministira Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad dabalatee hoggantoonni dhaaba ODP hookkara torban darbe Naannoo Oromiyaatti mudatee lubbuu namoota 78 galaafatee walqabsiisanii godinaalee garaa garaatti imaluun ummata waliin marii gaggeessaa turan.
Marii nageenyaa Kamisa magaalaa Ambootti taasifameen MM Abiy Ahimadiifi Obbo Lammaa Magarsaa irratti kan argaman yoo ta'u, qaamolee hawaasaa godina Shawaa Lixaafi naannoo ishee marii kanarratti argamaniiru.
Waltajicharrattis gaaffiin abbaa biyyummaa magaalaa Finfinnee, nageenyi Oromiyaafi Afaan Oromoo afaan Federaalaa ta'uu qaba kanneen jedhan ijoo turan.
Hirmaattonni marii kanaa kan jedhan keessaa...
Namni gaaffilee ka'an keessaa tokko gaafatee ture ana jedhu akkas jedhe: "Maal isa goonaan mootummaan ilmaan keenya nu jalatti fixa? Gaafa ministirri muummee badhaasa argatee hiriira deggersaa baate.
Jawaar ammoo ni ajjeefama, ni hidhama jennaan mormii baate malee waan tokkoyyu hin tuqine. Kanaaf, maaliif ijoolleen keenya nu jalatti dhumti? Jaarsi waggaa 85 akkamitti du'a? Yeroo diinni nu ajjeesaa turellee namni keenya akkanatti hin duune."
Hirmaattonni kunneen tibba kana hiriira aggaammii Xiixalaa Siyaasaa Obbo Jawaarirratti yaadame mormuuf bahameen walqabatee uumame akka hedduu isaan mufachiise kaasu.
Yeroo gammachuus ta'e mufii qaban hiriira bahanii karaa naga qabeessa ta'e dhiyeeffachuun mirga isaanii ta'ee osoo jiruu, qaama nageenyaa dabalatee kanneen fedhii addaa qabaniin hokkaratti jijjiiramuun waan hin malledha jedhu.
"Dhiiga dhangala'e, badii ijoollee keenyarra ga'e, badii margituu keenyarra ga'e, miidhaan dhaloota booruurra ga'e nu gaddisiiseera. Nu dallansiiseera," jedhu namni biroon waltajjii marii kanaarratti hirmaatan.
Dhimma kana ooltanii osoo hin buliin ogummaadhaan duukaa buutanii warri yakka kana raawwatan seeratti akka dhiyaatanii adabamaniif gaafataniiru.
Marii MM Abiy hawaasa waliin tibbana taasisanirratti maaltu ture?
Jiraattuun magaalaa Amboo marii sanarratti hirmaatte biraa Ayishaa Mohaammadidha. Gaaffiiwwan ummata Oromootiin ka'an akka Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa Federaalaa gochuufi abbaa biyyummaan Finfinnee deebii argachuu akka qabu ka'uu dubbatti.
"Ummanni gaaffii biroo akka Finfinneen kan eenyuuti? Finfinneen kan keenyadha maaliif hin jennee? Akkas jechuudhaaf eenyuun sodaattu? Kanaaf ammas waa'een Finfinnee maalidha Oromoodhaaf?," kanneen jedhan ka'aniiru jetti.
Deebii aanga'oota mootummaa
Marii Amboo kana kan gaggeessan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimadiifi Ministirri Raayyaa Ittisa Biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa namoota Obbo Jawaar Mohaammad irratti yakka yaadanirattis ta'e humnoota nageenyaa mootummaa magaalaa Ambootti namoota nagaa ajjeesanirratti tarkaanfii seeraa akka fudhatan dubbataniiru.
Image copyright Miidiyaa hawaasummaa
Gaaffii dhimma abbaa biyyummaa Finfinneerratti ka'eefis aanga'oonni kunneen deebii kennaniiru jedhan hirmaattonni walga'ichaa BBC Afaan Oromoo dubbise.
Waa'ee gaaffii Finfinnee itti deemaa jirra jechuu aanga'oota kanaa ibsanii, Finfinneen keenya ta'uu mirkaneessinee waggoota 150 booda achitti deebinee irreeffachuu dandeenyeerra jechuun deebii kennaniiru akka hirmaattota kanaatti.
Waa'ee gaaffii Afaan Oromoo afaan hojii Federaalaa akka ta'u jedhamees yeroo deebisan, dhibbentaa 90 irra jirra waan ta'eef yeroo dhiyoo keessatti ni deebisan jedhan.
Galma keessatti marii, alarraammoo mormii
Yeroo aanga'oonni kunneen hawaasa waliin Amboo mooraa Hoteela Abbabach Mattaafariyaa keessatti gaggeessaa turanitti, dargaggootni hedduun ''down down ODP'' jechaa mormii dhageesisaa turan jedhu jiraataan magaalittii tokko BBC'tti yeroo himan.
Dargogoonni hedduun sagalee mormii dhageessisaa turanis maaliif marii ture sanarratti carraa argannee gaaffii keenya hin dhiyeeffannu kan jedhus ture.
Namoonni akka aanga'oota kunneen waliin mariyataniif filatamanis karaa ifa ta'een waan hin taaneef nuun bakka bu'anii gaaffii hawaasichaa nuuf dhageessisuu dhiisuu malu jedhu namoonni BBC Afaan Oromoo dubbise.
Dargaggoon tokko akkas jechuun mufii qabu ibsata: " Nuti sagalee keenya seennee yoo hin dhageessifannee, rakkoo as jiru yoo itti hin himannee, jarri kun eenyu waliin mariyatuu?
Kaabinee waliin kanaan duras mariyatamaa ture. Ammas kaabinee ol seenee isaan faarsee, isaan jajee galuudhumaaf deema.
Nuti ammoo rakkoo nurra jira, rakkoo akka sabaatti Oromoofi Oromiyaarra jiru kaafne itti himna yoo furmaata kennuu danda'u ta'e."
Maaliif nu seensisuu diddu jedhanii ijoolleen qawwee hin sodaannu, qawween jilbeeffachiisuun hin dand'amu jedhan.
Gochi Oromoofi Oromiyaa irratti yeroo hunda ta'aa jiru gocha sirrii miti. Garamitti akka jijjiiramni jedhame kun deemullee ummanni sirriiti adda baafachuu akka barbaadu gaafataa turuu nutti himan dargaggoonni Amboo kun.
Hokkora gidduu kana dhalateen maanguddoo waggaa 80 dabalatee namoonni jaha magaalaa Ambootti ajjeefamaniiru.
Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa akka ibsetti guyyaa Roobii darbes Ministirri Muummee Abiy Ahimadiifi Ministirri Raayyaa Ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa magaalaa Harar galma Calanqootti marii gaggeessanii turan.
Hirmaatonnis godinaalee Harargee lameeniifi bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa, akkasumas Naannoo Harariirraa babbaahanis gaaffi jajjabduu kaasanii turan.
Mariin nageenyaa kun magaalota Oromiyaa biroo keessattis taa'ama tureera.
Ofi mariin nageenyaa kun hangam barbaachisaadha? Yeroon itti gaggeeffamuu malu ammoo maal ta'uu qaba?
Dhimma kanaaafi Dr. Abiy Ahimad qabsoo Oromoo garamitti geessaa akka jiran Dr. Biraanuu Leenjisoo gaafanneerra.
Mariin aanga'oonni kunneen qaamolee hawaasaa waliin taasisan barbaachisaa ta'uu kan himan Dr. Birhaanuun, gochuun erga hin hafnee garuu osoo rakkoon hin uumamiin dura ta'uu mala jedhu.
"Akka mootummaatti karoora baafattee, tarsiimoo qabaattee rakkoo ummataa hiikuudhaaf hojjechuudha malee bakkuma ibiddi ka'etti ummata walitti qabanii kadhachuun kun baramaadha sirna kana keessatti."
Akka Dr. Birhaanuun jedhanitti, [ODPO] waggoota 27 keessatti kan ittiin beekamu waanuma kanadha; yeroo baayyee deemanii jaarsummaa taa'uu, ummata kadhachuu, waadaa galuu garuu booda ammoo waadaa sana hojiitti hiikuu dhabuun kun wanuma barame waan ta'eef aadaa barame kana osoo itti fufsiisuu dhaabanii namatti tola.
MM Abiy: ‘‘Namoonni baay’ee Abbichuu jedhani na waamu’’
Jijjiirama jechuun jedhan Dr. Birhaanuun, wanta kanaan dura rakkoo uumerraa adda bahuudhaan waan addaa hojjechuu ta'uu qaba.
Yeroo marii hawaasa waliin gaggeessanis kaabinootuma isaan deggeran waliin qofa taasisuun rakkoo uumame hubatanii furuurrattillee sirrii miti, jedhan Dr. Birhaanuun.
"Aanga'oonni ol-aanoon odeeffannoo kan argatan kaabineerraati. Kun garuu yeroo baayyee odeeffannoo dogogoraati sababiin isaas, isaan irraa dabsanii biraan ga'aa turan.
Kanaafuu, [kaadiree] qofa dubbisuun ykn nama isaan deggeru waliin haasa'uun hubannoo bal'aa akka hin arganne gochuu danda'a.
Wanta dhugumaan lafarra jiru akka hoggantoonni ol-aanoon hin hubanne godha. Kaabinee qofaa ykn miseensa dhaabaa waliin haasa'uun gaaffii namoota miseensa hin taane kan hammatu waan hin taaneef sirrii natti hin fakkaatu," jedhu.
Mootummaa jechuun kan warra isa deggeruu qofa osoo hin taane kan warra mormaniitis waan ta'eef hundarraayyu yaada fudhachuun akkaan barbaachisaa ta'uus dubbatu.
Dargaggoonni Ambotti mormaa turan sagalee dhageessisaa turan keessaa tokko Ministirri Muummee Dr. Abiy Ahimad waadaa keenya nu ganeera kan jedhu ture.
Dr. Abiy qabsoo Oromoo ni dagatanimoo milkeessuudhaaf dhama'aa jiru?
Haalli Ministirri Muummee Abiy itti jiran gaaffii ummata Oromoofi qabsoo Oromoo kan dagatanidhamoo milkeessuudhaaf kan dhama'an isinitti fakkaata gaaffii jedhuuf Dr. Birhaanuun akkas jedhu.
"Isarratti ani shakkii tokkollee hin qabu. Gaaffii saba Oromoo dhugoomsuudhaaf akka hojjetan waan tokko hin shakku akka nama dhuunfaa tokkootti''.
Gaaffiin Oromoo tokko tokkoon ka'aa turan sun bifa kanaan dura tureen, caasaa kanaan dura tureen, ilaalchaafi yaada kanaan dura tureen deebisuun baay'ee walxaxaa waan ta'eef bifa haarawaan, bifa gaaffii sana hammatuun [accomodate] of ijaaruudhaan maloota adda addaa baasuudhaan deebisuudhaaf tattaafataa akka jiran dhugumaan hubachuu danda'eera jechuu nan danda'a,'' jedhan.
''Shakkiimmoo irraa hin qabu. Dhugumaan ummata kana ganuudhaaf hojjetan jedhee abjuumaanuu yaadee hin beeku. Sanas waan godhan natti hin fakkaatu," jechuun dubbatan.
'Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'eyyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra' MM Abiy
MM Abiy Ahimad, Fiicheetti: ‘‘Namoonni baay’ee Abbichuu jedhanii na waamu’’